लेख-रचना Archives - अन्नपूर्ण टाइम्स
शोभमय व्यक्तित्व कि आवृत्ति
कसलाई भन्ने समाजसेवी ?
MCC सम्झाैताले निम्त्याउन सक्ने खत्रा
मेरो स्कुले बाल्यकाल
टीकाप्रसाद भट्ट रामेछापको मन्थली बेशींमा ७ कक्षा सम्म अध्यापन गर्ने विद्यालय थियो महेन्द्रोदय निमावि । राजा महेन्द्र भ्रमणमा आएको मौका छोपेर स्थानीय शिक्षाप्रेमीले पाठसाला माग गरेकाले राजाले बक्सिस दिएको हुदाँ महेन्द्रोदय नाम राखेको रे । स्व. हृदयराज शर्मा र स्व. शंकरप्रसाद सत्यालको प्रयासमा स्थापना भएको विद्यायमा स्व. भरतराज...
आज मित्रता दिवस : किन चाहिँन्छ साथी ?
आज अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस विश्वभरि मनाइदै छ । प्रत्येक बर्ष अंग्रेजी महिना अगस्ट महिनाको पहिलो आइतबार मनाउने गरिन्छ ।आफ्ना हितैषी मित्रहरुसंग एक आपसमा उपहार र शुभकामना आदान प्रदान गरि मनाउने प्रचलन छ । मित्र र मित्रताप्रति समर्पित हुने यो दिवस अमेरिकामा सन् १९३५ देखि मनाउन शुरु गरिएको हो तर...
लघु कथा : पाँच रुपियाँ !
लाल चन्द्रले हिडदा हिडदै एक्कसि सम्झन्छ बिहान घरमा तरकारी लिएर आउनु भनेर श्रीमतीले भनेको कुरो। घर जाने वाटोमै सागसब्जि बेचि रहेको थियो।साग मुठाको २० रुपिया भन्दै थिईन एउटी अधबैसे आईमाई पछ्यौरीले घामलाई छेक्दै लाल चन्द्रसंग। १५ रुपियाँमा दिनु न भनी मोलमोलाई गर्न लाग्दासंग हिडेकि आफ्नी छोरीले बाउलाई यसो कुहिनाले हल्का...
गजल : रोएँ आज
प्रकाश बुढाथोकी अन्तत सपनाको संसार ढलेर रोएँ आज ति पाईलाहरु अन्तै चलेर रोएँ आज दोषी आफै हुँ कसलाई केभनौं खै शिखर चुम्न लाग्दा गलेर रोएँ आज सुखदुःख साटासाट गरौला भन्थे र सोच्थे अमृत रोपेको बिष फलेर रोएँ आज जिवन दर्पणछॉया न हो आज या भोली खै केभयो सपनीमा छलेर रोएँ आज दिउसै सूर्यको प्रकाश हराए जस्तो भो उकुसमुकुस...
श्रीना नेपाल काठमाडौँ - २३ वर्षकी थि रे, ३० वर्षकी थि रे! होइन ७४ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो रे! का हुनु १४ वर्षकी मात्र थिइन रे! होइन नि १२, ए ए होइन ७ वर्ष, होइन होइन ६ वर्ष कि ५ वर्षकी हो र ! धर्मगुरुलाई देखाउन गाकी थि रे, त्यसरी एक्लै जाने...
प्रेम दिवस अर्थात भ्यालेन्टाईन डे : युवायुवतीमा छाएको विकृति
✍️ रामेश्वर शर्मा भुर्तेल "सम्बन्ध कसैको नि बन्धन नबनोस् भित्रभित्रै तड्पाउँने क्रन्दन नबनोस् बिश्वासले जोड्नुपर्छ प्रेमको नाता सँधै हृदयको साम्राज्य विखण्डन नबनोस" नेपालसहित विश्वभर आज भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेम दिवस मनाइँदैछ । विशेष गरी युवा युवतीले यसलाई विशेष चाडकै रुपमा मनाउने गरेका छन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा पनि प्रेम दिवस विशेष रुपले मनाउने...
रामेछाप, पानी र जनै
टीकाप्रसाद भट्ट कक्षा ८ देखि रामेछापको गौरीशंकर माविमा पढ्न जानु पर्दथ्यो । मन्थलीमा कक्षा ७ सम्म मात्र पढाई हुन्थ्यो । रामेछाप जिल्ला सदरमुकाम र राम्रो नाम चलेको स्कुल भएकाले पनि धेरैको रोजाई गौरीशंकर मावि नै हुन्थ्यो । मन्थली तिरका कोही कोही चिसापानी र खिम्ती पनि जान्थे । हरेक आईतबार सामल...
नेपाली जनताले कहिलेसम्म हरियो तरकारी र फलफूलसंगै बिषादी सेवन गर्ने ?
रामेश्वर शर्मा भुर्तेल हुन त मान्छेलाई थाहा छ स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो तर पनि स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सवालमा समेत मान्छे असाध्यै असंवेदनशील बनेको देखिन्छ। नेपाली जनता खासगरी राजधानी लगायतका शहरका बासिन्दा बिषाक्त तरकारी र फलफूल खान बाध्य छन् । यो तथ्यको उद्घाटन बजार अनुगमनकर्ता सरकारी निकायबाटै भएको...